Keligii Taliye Macangag ah oo aan ilaahay iyo ummadiisa midna ka xishoonayn, Ismaaciil Cumar Geelle ayaa la yidhi doorashadii dhacday wuxuu hellay cododka %86.8, | Berberatoday.com
Keligii Taliye Macangag ah oo aan ilaahay iyo ummadiisa midna ka xishoonayn, Ismaaciil Cumar Geelle ayaa la yidhi doorashadii dhacday wuxuu hellay cododka %86.8,
Keligii Taliye Macangag ah oo aan ilaahay iyo ummadiisa midna ka xishoonayn, Ismaaciil Cumar Geelle ayaa la yidhi doorashadii dhacday wuxuu hellay cododka %86.8, ninka ugu dhaw ayaa hellay cod dhan %7.4, waxaa kale codkoodu ma soo dhaafin %1.
Weli doorasho ka khariban, miyaad aragteen, waxaa lagu bixiyay malaayin dollar, waxaa la iskugu yeedhay intaaso haayadood oo warbaahin ah, oo midkiiba boqolaal kun oo dollar oo cashuurtii dadka reer Jibouti ah lagu bixinaayay.
Waxaan rajaynaya in maalin aan fogayn aynu aragno Ismaaciil Cumar Geelle oo sidii Qaddaafi maydkiisa dhulka la jiido, mid iga gunta, keligii taliye nolol fiican ku badbaada taariikhda dunida ma soo marin.
Hadda u fiirso cidda ugu horaysa ee u hambalyeyn doonta waa madaxdeena ha ugu horayso xukuumadda iyo guddoomiyaha xisbiga Kulmiye oo hore u sheegay in madaxweynaha Soomaali leedahay ee la aqoonsanyahay yahay Ismaaciil Cumar Geelle.
Waxaan huba in Madaxweyne Axmed Siilaanyo alla ha sharfo eh, aanu jeclayn Geelle, balse masaska iyo cayayaanka ku wareegsani ay badeen inaynu u jabno Geelle Batal.
Ilaahay waxaan u baryaya inuu shacabka reer Jibouti faraj kheyr qaba siiyo, maalin uu ka itaal xunyahay ma jirto Geelle, ammaankiisu waxay ku jiraan gacmaha Somaliland, ilaahay inagana bisha March dawlad Kulmiye dhaanta oo cadli ah ha ina siiyo si aynu qayrkeen ula gorgortano